के बाइबल भगवान्‌को किताब हो? | बाइबल प्रश्नहरूको जवाफ
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उङ्गाबेरे उज्बेक उम्बुन्डु एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज किसोंगे कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टुभालुअन डच डाँग्मे डेनिश त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली न्यानेका पंगासिनन् पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मङ्गोलियन माया मालागासी माल्टिज मिजो मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा वायुनाइकी शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन
भगवान्‌को किताब विशेष भएको तपाईं आशा गर्नुहुन्छ होला। बाइबल त्यस्तै एउटा किताब हो। सयौं भाषामा बाइबलका अरबौं प्रतिहरू छापिएका छन्‌। बाइबलमा पाइने बुद्धिमानी सल्लाहहरूले मानिसमा राम्रो परिवर्तन ल्याउन सक्छ।—१ थिस्सलोनिकी २:१३; २ तिमोथी ३:१६ पढ्नुहोस्।
बाइबलले भविष्यबारे सही कुरा बताउँछ। यसबाट पनि यो भगवान्‌को किताब हो भनेर थाह पाउन सक्छौं। के कुनै मानिसले यसो गर्न सक्छ र? उदाहरणको लागि बाइबलमा यशैया भन्ने किताबलाई विचार गरौं। येशूको जन्मभन्दा लगभग सय वर्षअघिको यसको एक प्रति मृत सागर नजिकैको गुफामा भेटियो। त्यसमा बेबिलोन सहर बसोबास गर्नै नमिल्ने हुनेछ भनेर लेखिएको थियो। येशूले पृथ्वीमा सेवा गरेको धेरै वर्षपछि यो भविष्यवाणी पहिलो चोटि पूरा भयो।—यशैया १३:१९, २०; २ पत्रुस १:२०, २१ पढ्नुहोस्।
बाइबल कसरी लेखियो?
बाइबल लेख्न लगभग १,६०० वर्ष लाग्यो। बाइबल लगभग ४० जना पुरुषले लेखेको भए तापनि यसको मूल विषय एउटै छ। तिनीहरूको कुरा आपसमा बाझिएन। यो कसरी सम्भव भयो? भगवान्‌ले नै तिनीहरूलाई लेख्न लगाउनुभयो।—२ शमूएल २३:२ पढ्नुहोस्।
भगवान्‌ले कहिलेकाहीं स्वर्गदूत, दर्शन वा सपनामार्फत बाइबल लेखकहरूसँग कुरा गर्नुभयो। धेरैजसो अवस्थामा उहाँले ती लेखकहरूको मनमा आफ्नो सन्देश राखिदिनुभयो र तिनीहरूले सन्देश आफ्नै शैलीमा लेख्न सक्थे।—प्रकाश १:१; २१:३-५ पढ्नुहोस्।
बाइबल—परमेश्‍वरले दिनुभएको किताब
व्यक्‍तिगत समस्याहरू आइपर्दा बाइबलले तपाईँलाई कसरी मदत गर्न सक्छ? यसका भविष्यवाणीहरूमा तपाईँ किन भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ?